तपाईंको हातमा पनि पैसा टिक्दैन ? यस्तो उपाय अपनाउँदा हुनसक्छ फाइदा « Dainik Online
तपाईंको हातमा पनि पैसा टिक्दैन ? यस्तो उपाय अपनाउँदा हुनसक्छ फाइदा
मासिक तलब बुझेर दैनिकी सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको प्रमुख समस्या पैसाको बचत नहुनु हो । आफ्नै व्यवसाय गर्ने व्यक्ति पनि पैसा नजोगिएर हैरान हुन्छन् ।
कमाइ र खर्चको तालमेल नमिल्दा पैसाको बचत नहुने समस्या भोग्नेहरु धेरै हुन्छन् । देखिने र ठूलो खर्च गर्ने स्थान पनि हुँदैन तर साथमा पैसा बचत पनि नहुँदा धेरै मानिसले मेरो हातमा त पैसा नै टिक्दैन भन्ने पनि गरेका छन् ।
आइतबार पनि घट्यो सुनको मूल्य, चाँदीको मूल्य भने यथावत